2015.10. 30 KPTV Live Today. 9.39 Am From KNDO information သုက်ခေါဟ်..စောနယ်ဒါး . Par 4
Posted by Kptv on Friday, October 30, 2015
တင်ပြသူ pahteepakaw No comments:
ပတ် ၀န်း ကျင် ထိန်း သိမ်း ရေး သ မား တွေ က ကျွန် တော် တို့ က ရင် တွေ ကို ထ မင်း မ စား ရ အောင် အ နှောက် အ ယှက် လုပ် နေ သ လား လို့ တောင် ကျွန် တော် တို့ ခံ ယူ တဲ့ အ ပိုင်း တွေ ရှိ တယ်။
K N U ခေါင်း ဆောင် တစ် ဦး အ နေ နဲ့ ဒီ စ ကား ပြော တာ ဟာ က ရင် လူ မျိုး နဲ့ K N U ကို စော် ကား တ နဲ့ အ တူ တူ ပါ ပဲ။ K N U မှာ ပတ် ၀န်း ကျင် ထိန်း သိမ်း ရေး နဲ့ ပတ် သက် ပြီး ဥ ပ ဒေ တွေ ရှိ ထား ပါ တယ်။ ဥ ပ မာ ရှား ပါး တိ ရိ ဆန် တွေ ကို သတ် ရင် ကြီး လေး တဲ့ အ ပြစ် ဒဏ်၊ သစ် ခုတ် တာ နဲ့ ပတ် သက် ပြီး ဥ ပ ဒေ တွေ ရှိ ပါ တယ်။ ကျွန် တော် မှတ် မှတ် ရ ရ ရှိ တဲ့ ဥ ပ ဒေ တစ် ခု က တော့ အင် ပင် ခုတ် ရင် ကြီး လေး တဲ့ အ ပြစ် ဒဏ် ပေး ပါ တယ်။ အဲ ဒါ ကို ကျွန် တော် နား မ လည် ပါ ဘူး။ ဘာ ကြောင့် လဲ ပေါ့။ ဟို လူ မေး ဒီ လူ မေး တော့ အ များ ဖြေ တာ က အင် ဖက် ကို အိမ် အ မိုး လုပ် လို့ ရ လို့ တဲ့ ဒီ အ ဖြေ ကို ကျွန် တော် မ ကျေ နပ် နိုင် တာ နဲ့ သစ် တော က သူ ငယ် ချင်း တစ် ယောက် ကို မေး တော့ သူ က ရျင်း ပြ တယ် အင် ပင် ဆို တာ ပျိုး ယူ လို့ မ ရ စိုက် ယူ လို့ မ ရ ကိုင်း ကူး လို့ မ ရ သူ ဟာ သူ သ ဘာ ၀ အ ရ ပွား တာ တဲ့၊ တ ကယ် လို အင် တော ဆို တာ မ ရှိ တော့ ရင် အင် ပင် ဆို တာ ဘယ် လို မှ ပြန် စိုက် ယူ လုပ် ယူ လို့ မ ရ ဘူး တဲ့။ ကျွန် တော် တို့ ဘိုး ဘွား တွေ လက် ထက် က တည်း က ပတ် ၀န် ကျင် ကို ဥ ပ ဒေ နဲ့ ထိန်း သိမ်း ခဲ့ တာ ပါ။ ဒါ ကို အ ခု ခေါင်း ဆောင် ကြီး က မ သိ ဘူး လား၊ ထ မင်း မ စား ရ တော့ ဘူး ဆို တာ က တော့ ဘယ် သူ သူ ခေါင်း ထဲ ကို ရုက် သွင်း ပေး လုက် လဲ မ သိ ဘူး။ ထ မင်း စား ရ လောက် အောင် ဆို ရင် သ ဘာ ၀ ပတ် ၀န်း ကျင် ဘယ် တော့မှ မ ပျက် စီး ဘူး။ သ ဌေး ဖြစ် ဆို ရင် တော့ ပျက် မှာ ပေါ့။ ကိုယ် သူ ဌေး ဖြစ် ဖို့ ကိုယ့် လူ မျိုး ကိုယ့် မြေ ကိုယ့် ရေ ကို စ တေး တော့ မှာ လား ခေါင်း ဆောင် ကြီး ရယ်။
သတ္တုအစမ်းတူးဖော်ခွင့်ကိစ္စ ကျောက်ကြီးမြို့နယ် ဒေသခံများက အမြန်ဖြေရှင်းပေးစေလို
June 29, 2015 • Posted in
ဇွန် ၂၉ရက်၊ ၂၀၁၅ခုနှစ်။ နန်းဝေဖြိုးဇာ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်လေးပင်ခရိုင် ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ စလဲကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း၌ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(ကေ အဲန်ယူ)နှင့် မြန်မာအစိုးရတို့မှ ကုမ္ပဏီအား အဖြိုက်နက်သတ္တုအစမ်း ဝင်ရောက်တူးဖော်ခွင့်ပေးရာတွင် မြေယာသိမ်းဆည်းမှုများ ရှိသည့်အတွက် ဒေသခံများက အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းပေးလိုကြသည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါ အဖြိုက်နက်သတ္တုအစမ်းတူးဖော်မှုကို ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ရှိ ကေအဲန်ယူနှင့် အစိုးရတို့က ယခင်နှစ်က ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးနောက် ပြီးခဲ့သည့်တစ်လကျော်မှစ၍ ရတနာစိုင်းကောင်းမြတ်ကျော်ကုမ္ပဏီနှင့် စိုးနိုင်ဖြိုးကုမ္ပဏီတို့ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ရာ ဒေသခံများ၏ မြေဧက ၇၃,၁၂၄ကို သိမ်းဆည်းထားသလို လျော်ကြေးပေးဆောင်ရန်လည်း ယခုအချိန်ထိ တစုံတရာ မသိရသေးကြောင်း ကျောက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဒေသဖွံ့ဖြိုးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ တာဝန်ခံဖြစ်သူ နော်တပီးသာ့က ပြောသည်။
နော်တပီးသာ့က “စီမံကိန်းလုပ်တဲ့ နေရာမှာ အသိမ်းခံရတဲ့ ဒေသခံ မြေဧကတွေဟာ လျော်ကြေးမရှိတဲ့အပြင် ပွင့်လင်းစွာ မလုပ် တဲ့အတွက် ဒေသခံဘက်က နစ်နာရတယ်။ ဒီကိစ္စကို ဒေသခံဘက်ကလည်း လွှတ်တော်ကို စာတင်ထားတယ်။ သမ္မတနဲ့ ကေအဲန်ယူဗဟိုကိုလည်း ဆက်လက် စာတင်ဖို့ရှိတယ်။ တကယ်လို့ တစုံတရာ ဖြေရှင်းမှုတွေ မလုပ်ပေးဘူးဆိုရင် ဒေသခံတွေ ကတော့ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဆန္ဒထုတ်ဖော် ကန့်ကွက်သွားမှာပဲ”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ကျောက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်း သတ္တုအစမ်းတူးဖော်ရန် ကေအဲန်ယူမှ ယမန်နှစ် ဧပြီလတွင် ကုမ္ပဏီကို ခွင့်ပြုချက်ပေးခဲ့ပြီးနောက် အစိုးရဘက်မှလည်း ဒီဇင်ဘာလတွင် အလားတူ သဘောတူ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ အစမ်းတူးဖော်ခွင့်ရရှိရန် ကုမ္ပဏီဘက်ကလည်း ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လမ်းဖောက်လုပ်ပေးသွားမည်ဟု သဘောတူထားကြောင်း သိရသည်။
MPC လွှတ်တော် NNER နဲ့ ကျောင်းသား တွေသဘောတူလက်မှန်ထိုးထားတဲ့ အချက်တွေကို ဘေးဖယ်ပြီး အတည်ပြုလိုက် ကြတာပါ။ တိုင်းရင်းသားတွေ NCA ကိုလက်မှန်ထိုးပြီး နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပြီး သဘောတူ ညီချက်တွေကိုလဲ ဒီအတိုင်းပဲလုပ်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီအစိုးရ နဲ့ ဒီလူ တွေကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ယုံ ရ မှာ လဲ။
တိုင်းရင်းသားများ တောင်းဆိုချက် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ဝေဖန်ပြစ်တင်
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးနှင့် ဆွစ်ဇာလန်သံအမတ် တွေ့ဆုံစဉ် (ဓာတ်ပုံ - Senior General Min Aung Hlaing )
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တချို့ရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေဟာ တို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို ထိခိုက်စေပြီး တိုင်းပြည် တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှုကို ထိခိုက်စေတဲ့ လှုံ့ဆော်မှုတွေ တွေ့နေရတယ်လို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောပါတယ်။
ဇွန်လ ၁၇ ရက်က နေပြည်တော်မှာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ခရစ္စတိုဖာဘာဂျီနာတို့ တွေ့ဆုံခိုက် ပြောကြားခဲ့တာပါ။
အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က “ဖက်ဒရယ်ကို အခြေခံသည့် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို လျှောက်လှမ်းရာတွင် တိုင်းပြည်တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးသည် အရေးကြီးကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် တိုင်းပြည်၏ ပကတိ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို သိရှိဖို့ လိုကြောင်း၊ အချို့တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ၏ တောင်းဆိုမှုများသည် အဓိပ္ပာယ်တမျိုး သက်ရောက်နေကြောင်း၊ ဒို့တာဝန် အရေးသုံးပါးကို ထိခိုက်စေမည့် အခြေအနေများ တွေ့ရှိရကြောင်း၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို ထိခိုက်စေသည့် လှုံ့ဆော်မှုများကိုလည်း တွေ့ရှိရကြောင်း။” စသဖြင့် ပြောဆိုခဲ့တာပါ။
ပြည်ထောင်စုအင်စတင်ကျုက ဦးခွန်ဆိုင်းကတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးရဲ့ အခုလို ပြောဆိုမှုဟာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေက အပစ်ရပ်စာချုပ်လက်မျတ်ထိုးဖို့ တမင်သက်သက်အချိန်ဆွဲနေတယ်လို့ မြင်ပြီး ပြောတာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်ပါတယ်။
“တပ်မတော်ဘက်က မြင်တာက ၁ နှစ်ခွဲကျော် အချိန်ယူပြီးတော့မှ ကြိုးစားပမ်းစားနဲ့ စာချုပ်မူကြမ်းကို လုပ်ခဲ့တယ်။ အခု ဆက်လုပ်နေတဲ့ဟာက တမင်သက်သက် အချိန်ဆွဲတယ်လို့ သူတို့ မြင်ပုံရတယ်။ အဲ့ဒီလို မြင်ပုံရတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီဝေဖန်သုံးသပ်မှုက အခုလိုမျိုးပေါ်လာတာပေါ့။”
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲ ဂျပန်သတင်းဌာနတခုနဲ့ တွေ့ဆုံခန်းမှာလည်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တချို့ဟာ မတရားသဖြင့် ရရှိထားတဲ့ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားတွေကို ကာကွယ်ဖို့ လုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့ စွပ်စွဲ ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒီပြောဆိုချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ဦးခွန်ဆိုင်းက အကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့နေရာမှာ နှစ်ဘက်စလုံးက အနည်းစုမှာ ရှိနေတာဖြစ်လို့ တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ မပြောသင့်ဘူးလို့ မှတ်ချက်ပေး ပြောပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ လော်ခီးလာညီလာခံက အပစ်ရပ်စာချုပ်မူကြမ်းကို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်လိုက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအပေါ် ဝေဖန်ပြစ်တင် ပြောဆိုချက်တွေ ဆက်တိုက် ထွက်ပေါ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
DVB -တပြည်လုံးအပစ်အခတ်ရပ် စာချုပ်အပေါ် KNU နှင့် ကရင်များအမြင်
Karen Community Base groups want Transparency
ကားဓါးပြမှုဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူ ကရင်ရွာသားများမှာ တရားခံအစစ်မဟုတ်ဟု ဒေသခံများပြောဆို
April 8, 2015 • Posted in သတင်း
ဧပြီလ ၈ရက်၊ ၂၀၁၅ခုနှစ်။ ကေအိုင်စီ
မွန်ပြည်နယ်တွင် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၃ခုနှစ်က ရာဇာမင်းခရီးသည်တင်ကား ဓါးပြတိုက်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရကာ ၂၀၁၅၊ ဇန်န၀ါရီလ ၁၆ ရက်နေ့က ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူ ကရင်ရွာသား ၆ဦးမှာ တရားခံအစစ်များ မဟုတ်ကြောင်းနှင့် အမှုမှန် ဖော်ထုတ်ပေးရန် တာဝန် ရှိသူများအား တောင်းဆိုထားကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
ယင်းအမှုကို သထုံခရိုင် တရားရုံးတွင် စစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အပြစ်ပေးခံရသူ ရွာသားများဖြစ်ကြသည့် စောအောင်ထူး၊ စောဇော် ၀ိတ်၊ စောမောင်ငယ်၊ စောဝင်းဗိုလ်၊ စောဂေတို့အား ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၉၆ အရ သေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပြီး စောလင်းအောင် တို့ကို ပုဒ်မ ၃၉၆/၁၁၉ အရ တစ်သက်တစ်ကျွန်း ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။
သထုံမြို့နယ်၊ စခန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး စောထွန်းနိုင်ဦးက “ရာဇာမင်း ကားဓါးပြတိုက်မှုမှာ ကျနော် လေ့လာရသ လောက် ကျနော့်ရွာသားတွေ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ သူတို့က ဒီအနီးအနားမှာပဲ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြတယ်။ ခရီးသွား တာတွေလည်း မရှိဘူး။ ပြီးတော့ ဒီရွာက အိမ်ခြေ ၇၀ကျော်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ အခုက မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျနော်တို့သိတယ်။ ပထမဦးဆုံး အောင်ကျော်သန်းကို လာဖမ်းတယ်။ ကျနော်သွားတွေ့တော့ ပေးမတွေ့ဘူး။ မေးစရာတွေပြီးရင် ပြန်လွှတ်ပေးမယ် လို့ ရဲတွေက ပြောတယ်။ အောင်ကျော်သန်း ပြန်လွတ်လာပြီး ၁၀ရက်ကျော်လောက်မှာ နောက်ထပ်လူတွေကို ထပ်ဖမ်းပြန် တယ်။ အဖမ်းခံရသူတွေမှန်သမျှ ကျနော်က တွေ့ခွင့်တောင်းတယ်။ တစ်ယောက်မှ ပေးမတွေ့ဘူး။ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာ။ သူတို့တွေက ရိုးသားတဲ့ တောသူတောင်သားတွေပါ။ ဒီဓါးပြတိုက်မှုမှာ ဒီလူတွေ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ကျနော် ရဲရဲ အာမခံရဲပါတယ်”ဟု ဆိုသည်။
ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူများမှာ ရာဇာမင်းကား ဓါးပြတိုက်သူများ မဟုတ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့အား သထုံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၁ရက်နေ့တွင် မသကာင်္မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ရိုက်နှက်၊ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်သည်ကို မခံနိုင်တော့သဖြင့် ညီဖြစ်သူ၏အမည်ကို ပြောမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သထုံမြို့မရဲစခန်းတွင် ၆ရက်တိုင် ရဲများ၏ ဖမ်းဆီးရိုက်နှိက်၊ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်မှု အမျိုးမျိုးခံရပြီး ပြန် လည်လွတ်မြောက်လာသူ ညောင်ချောင်ရွာသား စောအောင်ကျော်သန်းက ပြောသည်။
“ရဲတွေက ကျနော် ပျိုးသွားနုတ်၊ ကောက်သွားစိုက်တဲ့နေရာမှာ လာဖမ်းတယ်။ စခန်းမှာ ကျနော့်ကို ခေါ်စစ်တယ်။ လက်နောက် ပြန်ခတ်တယ်။ အပေါ်မှာ ကြိုးဆွဲတင်တယ်။ ခြေဖနောက်မှာ သံချွန်နဲ့ ထောက်တယ်။ ကျောမှာ၊ ရင်ဘတ်မှာ ဒုတ်နဲ့ ရိုက်တယ်။ အခုထိ ကျနော် အလုပ်မလုပ်နိုင်သေးဘူး။ ကျနော် မသိရဘူးလို့ပြောလည်း မရဘူး။ မသိလို့ မရဘူး။ နင်သိရမယ်တဲ့ ရဲက ပြော တယ်။ ကျနော်က သိမှမသိတာ ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ ညှင်းဆဲတော့ ကျနော် မခံနိုင်တော့ဘူး။ ကျနော့်ကို သတ်ရင်လည်း သတ် လိုက်တော့လို့ ပြောတယ်။ နောက်ဆုံး ရိုက်ထု ညှင်းဆဲတာတွေကို ကျနော် မခံနိုင်တော့လို့ ကျနော့်ညီ ပါတယ်လို့ပဲ ပြောလိုက်ရ တယ်”ဟု ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
တရားခံဟုဆိုကာ ဖမ်းဆီးထားသူများမှာ နှိပ်စက်ခံကြရသည့်အပြင် ဖမ်းဆီးထားချိန် ကာလအတွင်း ၎င်းတို့၏မိသားစုမှာ စား သောက်ရေးအတွက်ပင် ခက်ခဲလာနေကြောင်း သေဒဏ်ချမှတ်ခံရသူ စောဇော်ဝိတ်၏ဇနီး နော်ဖွားလယ်က ကေအိုင်စီသို့ ယခု လို ပြောသည်။
“ဖမ်းထားတဲ့ တနှစ်ကျော်အတွင်းမှာ မိသားစုနဲ့ ကလေးတွေ အတော် အခက်အခဲတွေရှိတယ်။ ရုံးချိန်းမှာ သွားတွေ့နေရတော့ ကလေးတွေကိုလည်း ကောင်းကောင်းမွန်မွန် မထားနိုင်ဘူး။ အိမ်မှာလည်း တခါတလေ ကလေးတွေကို ထမင်းမကျွေးနိုင်ဘူး။ ကျမအနေနဲ့ ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူး။ အမှန်တရားအတွက် ကူညီပေးသူရှိရင်လည်း မျှော်လင့်တယ်။ အမှန်တရားကိုပဲ လိုချင် ပါတယ်”ဟု သူမက ပြောဆိုသည်။
ယင်းအမှုတွင် သက်သေခံပစ္စည်းကို ရဲများက မတင်ပြနိုင်သဖြင့် သထုံခရိုင် ဒုရဲအုပ်အောင်သူက မိုးကောင်းကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးခိုင်ထွန်းထံ သွားရောက် အကူအညီတောင်းခံရာ ဦးခိုင်ထွန်းက KNU တပ်မဟာ(၁)မှ သေနတ်တစ်လက်ကို ကျပ် ၈သိန်းဖြင့် သွားရောက်ဝယ်ယူခဲ့ပြီး တရားခံ၏ သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် တရားရုံးသို့ တင်ပြခဲ့ကြောင်း ယင်းအမှုအား လိုက်လံကူညီဆောင် ရွက်ပေးနေသည့် သထုံမြို့နေ စောထွန်းဝင်းက ပြောသည်။
စောထွန်းဝင်းက “သက်သေကလည်း မရှိဘူး။ ရွှေတွေပါတယ်။ ဆွဲကြိုးပါတယ်။ နာရီပါတယ်။ ဖုန်းပါတယ်။ ငွေသားပါတယ်။ အဲဒါတွေကို ရုံးမှာတစ်ခုမှ မဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ ရဲတွေက မိုးကောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ခိုင်ထွန်းဆီမှာ အကူအညီ သွား တောင်းပြီးတော့ ကျနော်တို့ [KNLA] တပ်မဟာ(၁) ဗျူဟာမှူးဆီမှာ သေနတ်တစ်လက် ၀ယ်လာပြီးတော့ ဒီအမှုနဲ့ချိတ်ပြီးတော့ ဒီလူခြောက်ယောက်ကို သေဒဏ်(၅)ယောက်၊ တစ်သက်တစ်ကျွန်း (၁)ယောက် အဲလိုအမိန့်ချခဲ့တယ်”ဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါခရီးသည်တင်ကားကို ဓါးပြတိုက်သူများသည် မွန်ဘာသာစကား ပြောဆိုကြပြီး ဓါးပြတိုက်စဉ် မွန်စကားပြောတတ်သည့် အတွက် မိမိ၏ပစ္စည်းများကို ယူဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိဟု ကားပေါ်ပါလာခဲ့သူ သံဖြူဇရပ်မြို့နေ ခရီးသည်ဒေါ်ရင်အေးက သထုံခရိုင် တရားရုံး၌ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၁ရက်နေ့တွင် ထွက်ဆိုထားသည်ကို တရားရုံးမှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
ယင်းအမှုသည် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၈ရက်နေ့တွင် ကျိုက္ခမီ-ရန်ကုန်၊ ရာဇာမင်း ခရီးသည်တင် မှန်လုံကား အမှတ်-၈ဇ/ ၁၁၁၁ ကို အမည်မသိလူ ၅ဦးက ဓါးပြတိုက်ကာ လူသတ်ခဲ့သည့်အမှု ဖြစ်သည်။ ယင်းအမှုတွင် သေဒဏ်နှင့် တစ်သက်တစ် ကျွန်း ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူများသည် တရားခံအစစ်များ မဟုတ်သည့်အတွက် ၎င်းတို့အား လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးရန်နှင့် တရားစီရင်ရာတွင် လွဲမှားမှုများစွာ ရှိနေသဖြင့် အမှုမှန် ပြန်လည် ဖော်ထုတ်ပေးရန် သမ္မတနှင့် နေပြည်တော်ရှိ ဌာနဆိုင်ရာ ၁၀ခုသို့ အသနားခံစာ ပေးပို့ထားသည်ဟု ဒေသခံများက ပြောဆိုသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး စစ်တမ်း (၁၂)
February 18, 2015 at 12:00pm
ဤပြသနာကို ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင် အရှက်ပြေပြောနေသလို“ရဲ တချို့ ကို သတ်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့ရာဇ၀တ်သား တဦးက ဦးဆောင်ပြီး တိုင်းပြည်လုံခြုံရေးကို ထိပါးအောင်လုပ်နေတာ။” ဟူ၍ အပေါ်ယံကြောကနေ
လက်မှတ်ထိုးတာ ဆင်းရဲလို့ လား
အမိုးတို့ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်းတီးရတော့မယ်။
လက်မှတ်ထိုးပြီး သူတို့ ကြမ္မာ သူ့ တို့ ဖန်တီးတယ်
ဓားမ ကိုင်ပြီး ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးကြမယ်။
သူတို့ စစ်မတိုက်တော့ဘူး ဖိုးခွား
သူတို့ ချမ်းသာ သွားပြီ။
ဒါဆို… ရွာကို ပြန်မယ်ဟုတ်လား
ဘယ်ရွာကို ပြန်မှာလဲ ဖိုးခွား
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရန် နိုင်ငံရေးပြသနာများအားနိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးအဖြေရှာသွားမည် ဟူသည့် ရပ်တည်ချက်မှာ တရားအရ မှန်ကန်ကြောင်းယုံမှားစရာမလိုပါ။ယင်းကို တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အစည်း အမြောက်အများက ဆယ်စု နှစ်များစွာ ကိုင်စွဲလာခဲ့ကြသည်။သို့ ရာတွင် ယခုအုပ်ချုပ်နေသည့် အရပ်သား အသွင်ယူ စစ်အစိုးရက နိုင်ငံရေးဆွေး နွေးပွဲများကျင်းပပေးနိုင်ရေးအတွက်
February 15, 2015 • Posted in တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း
ပြည်ထောင်စုနေ့တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆိုင်ရာ ကတိပြုချက် လက်မှတ်ထိုးမှုအပေါ်
ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့(ကေအဲန်အယ်လ်အေ) စစ်ဦးစီးမှူး ပထမတန်း(G-1) ဒုဗိုလ်မှူးကြီးစောလှငွေနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
ယခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ရက်နေ့က အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့(၄)ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (ကေအဲန်ယူ)၊ ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု ကရင်တပ်မတော်(ဒီကေဘီအေ)၊ KNU/KNLA-PC နဲ့ ရှမ်း(သျှမ်း)ပြည် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ကောင်စီ(RCSS) တို့က ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆိုင်ရာ ကတိပြုချက်ကို နေပြည်တော်မှာ လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါကိစ္စအပေါ် ကေအဲန်ယူ၏ လက်ရှိ ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (ကေအဲန်အယ်လ်အေ)မှာ စစ်ဦးစီးမှူး ပထမတန်း(G-1)အဖြစ် တာဝန်ယူနေတဲ့ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စောလှငွေရဲ့ သုံးသပ်ထင်မြင်ချက်ကို ကေအိုင်စီက တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။
မေး ။ ။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ရက်နေ့က